जनशक्त्ति छैन, देशभरका प्रयाेगशालामा स्वाबकाे थुप्राे – Health Post Nepal
जनशक्त्ति छैन, देशभरका प्रयाेगशालामा स्वाबकाे थुप्राे
२०७७ जेठ २७ गते १४:४८
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमितको संख्या नेपालमा पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । तर, सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकिरहेको छैन ।
हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाको क्षमता कम भएका कारण पनि संकलित स्वाबको परीक्षण समयमै गर्न नसकिएको हो। आइतबार बेलुकासम्म देशभर २६ हजारभन्दा बढी नमुना प्रयोगशालामै ‘होल्ड’ भएर बसेको छ।
आइतबारसम्म तथ्यांक हेर्दा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ हजार ४ सय ४८ पुगेको छ । त्यसमध्ये ४ सय ६६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
प्रदेश १ मा हाल ४ हजारको रिपोर्ट आउन बाँकी
कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि प्रदेश १ मा तीनवटा प्रयोगशाला रहेका छन् । अहिले विराटनगरको कोशी अस्पताल, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला विराटनगर) र धरानको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोनाको परीक्षण हुँदै आएको छ ।
तीनै प्रयोगशालामा दैनिक ६–७ हाराहारीमा नमुना परीक्षण हुने गरेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख जयवेन्द्र यादवले बताए ।
उनका अनुसार दैनिक २ हजारको हाराहारीमा स्वाब संकलन हुने गरेको छ । तर, हालको संकलित स्वाबको परीक्षण चापलाई धान्न सकिएको छैन ।
पछिलो दिनमा नमुना संकलन धेरै भएको तर प्रयोगशालाको परीक्षण क्षमता थोरै भएका कारण स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको प्रमुख यादवले जानकारी गराए। उनले ४ हजारभन्दा बढी नमुना होल्डमा रहेको बताए ।
प्रदेश २ मा १० हजार ३ सय ९७ को रिपोर्ट आउन बाँकी, राष्ट्रिय प्रयोगशालाले ग-यो नमुना लिन इन्कार
हालसम्म प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमित संख्या एक हजार नाघिसकेको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको बेला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा पिसिआर परीक्षण भने थप सुस्त बन्दै गएको छ ।
हाल प्रदेश २ मा वीरगन्ज, जनकपुर र राजविराज गरी प्रदेशको तीन स्थानमा पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ ।
विभिन्न आठ जिल्लामा गरी प्रदेश २ मा १० हजार ३ सय ९७ जनाको पिसिआर नतिजा आउन बाँकी छ।
२२ हजार ६६८ जनाको स्वाब संकलन भएकोमा त्यति नै संख्यामा नतिजा आउन बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले जनाएअनुसार सप्तरीमा ४ सय ३५, सिरहामा ६ सय १२, धनुषामा ६ सय ५२, महोत्तरीमा ८ सय ८९, सर्लाहीमा २ हजार १ सय ७२, रौतहटमा ४ हजार १५३, बारामा ८ सय ५२ र पर्सामा ६ सय ३२ जनाको पिसिआर नतिजा आउन बाँकी छ।
स्वाब संकलन र जाँचको दायरा बढ्न नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे स्विकार्छन् । संक्रमणको दायरा बढिरहेको तुलनामा नमुनामा संकलन र परीक्षणले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रादेशिक प्रयोगशालाले जेठ २१ र २२ गते पठाएको स्वाबका नमुनाहरू राष्ट्रिय प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। प्रादेशिक प्रयोगशालाले पठाएको नमुनाहरू फारमअनुसार नपठाइएको भन्दै राष्ट्रिय प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ।
वागमतीमा कर्मचारी अभाव, क्षमता भएर पनि परीक्षण नगर्दा स्वाब थुप्रियो
काठमाडौं उपत्यकामा रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा देशभरबाट आएको स्वाबको परीक्षण हुँदै आएको छ । तर, प्रयोगशालाको क्षमताभन्दा बढी नमुना संकलन हुन थालेपछि नमुनाहरू होल्डमा रहेको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राकेशकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
उनका अनुसार दैनिक रूपमा १ हजार ५ सय नमुना परीक्षण भइरहेको छ। ‘बाहिरका केही प्रयोगशाला बन्द अवस्थामा रहेका छन् । ‘त्यहाँबाट संकलित नमुना पनि यतै आउने गरेका छन्,’ यादवले भने, ‘प्रयोगशालाको गर्ने क्षमताभन्दा बढी नमुना संकलन हुने भएपछि होल्डमा त बस्ने नै भयो ।’
हाल २ हजार ५ सयको हाराहारीमा नमुना होल्डमा रहेको प्रयोगशालाले जानकारी दिएको छ। प्रयोगशालामा दैनिक ४ हजारको हाराहारीमा नमुना संकलन भइरहेको छ । देशका जुनसुकै ठाउँबाट आएको नमुना पनि परीक्षण गर्दै आएको यादवको दाबी छ।
उपत्यकामा भएका प्रयोगशाला (वीर, पाटन) मा दैनिक ५ सयको हाराहारीमा परीक्षण गर्ने क्षमता भएपछि ४०–५० भन्दा बढी परीक्षण हुन सकेको छैन ।
कर्मचारी तथा उपकरण अभावका कारण परीक्षणको दायरा बढाउन नसकिएको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले बताए । दैनिक १ सयको हाराहारीमा नमुना होल्डमा रहेको उनले जानकारी दिए।
वागमती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाहेक चितवनको भरतपुर अस्पतालमातहतमा कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडामा कीटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र र काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा प्रयोगशाला सञ्चालन भइरहेको छ।
भरतपुर अस्पतालमातहत रहेको कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशालामा भने समयमै परीक्षण भइरहेको छ । अहिलेसम्म पिसिआर किट मौज्दात रहेको र कर्मचारी पनि अभाव नभएको अस्पतालले जनाएको छ।
काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा सञ्चालित प्रयोगशालामा पनि हालसम्म ४ हजारको हाराराहारीमा नमुना परीक्षण गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. सुमनराज ताम्राकारले जानकारी दिए ।
प्रयोगशालाको कर्मचारीको अभाव भएका कारण परीक्षणलाई तीव्र पार्न नसकेको उनको गुनासो रहेको छ । सोमबार बिहानसम्म २ सयको हाराहारी नमुना परीक्षण गर्न बाँकी रहेको रहेको छ ।
गण्डकीमा संकलित नमुनामध्ये ७ सय ३८ को नतिजा आउन बाँकी
गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ५ सय बढीको स्वाब संकलन हुने गरे पनि आधाको मात्र परीक्षण हुने गरेको छ । कोरोना परीक्षण गर्नसक्ने मेसिन तीनवटा भए पनि गण्डकी प्रदेशमा एउटा मेसिनबाट मात्र परीक्षण हुँदै आएको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये १० जिल्लाको स्वाब परीक्षणका लागि पोखरा ल्याइने गरिएको छ । कान्छो जिल्ला नवलपुरको स्वाब भने भरतपुर कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा पठाइन्छ ।
बाँकी जिल्लाबाट संकलित स्वाबको कोरोना परीक्षण पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको कोरोना प्रयोगशालामा हुने गर्छ । कोरोना परीक्षण गर्न हाललाई एउटामात्र मेसिन भएकाले समस्या भइरहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख सपना सुवेदी बताउँछिन् । ‘हाम्रोमा अहिले दैनिक ५ सयभन्दा बढी स्वाब संकलन हुन्छ । परीक्षण क्षमता २ सय ५० हो । त्यसले गर्दा आधाजति स्वाब पेन्डिङमा रहन्छ,’ उनले भनिन् ।
गण्डकी प्रदेशको कोरोना प्रयोगशालामा आइतबार बिहानसम्म ५ हजार ३ सय ५ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि आएको छ । संकलित नमुनामध्ये ४ हजार ४ सय ५४ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । संकलित नमुनामध्ये ७ सय ३८ जनाको नतिजा आउन बाँकी छ । हालसम्म प्रदेशमा १ सय १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
प्रदेश ५ मा ५ हजार २१ नमुनाको रिपोर्ट बाँकी
(प्रदेश ५ मा तीनवटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । तर, जनशक्ति अभावले समयमै परीक्षण गर्न सकिएको छैन । आइतबार बेलुकी सम्म ५ हजार २१ नमुनाको रिपोर्ट बाँकी छ।
रूपन्देहीस्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा १ हजार १ सय ५१ नमुना परीक्षण गर्न बाँकी छ । बाँकेको भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा पनि नमुना थन्किएका छन् । भेरी अस्पताल प्रयोगशाला अनुसार ७ सय ७४ नमुना परीक्षण गर्न बाँकी छ । दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २ हजार ३ सय ९५ नमुनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । त्यस्तै प्रदेश ५ बाट नमुना संकलन भई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको ५ सय ९९ नमुनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
जनशक्ति नहुँदा परीक्षण दायरा बढेन
कोरोना परीक्षणमा हाल कर्णालीमा १८ सय स्वाब परीक्षण गर्न बाँकी रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा १ हजार ५ सय र जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तीन सयजनाको स्वाब परीक्षण हुन बाँकी छ । स्वाब संकलन भए पनि प्राविधिक कमजोरीका स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ भएको निर्देशनालयले जनाउँदै आएको छ ।
कर्णालीमा दैनिक एक दिनमा दुई सयभन्दा बढी स्वाब परीक्षण हुन सकेको छैन । हालसम्म कर्णालीमा कोरोना संक्रमित संख्या ६ सय ४१ पुगेको छ ।
सुदूरपश्चिममा तीनदिनयता कोरोना परीक्षण ठप्प
किट अभावका कारण सुदूरपश्चिममा तीनदिनदेखि कोरोना परीक्षण तथा नमुना संकलन कार्य ठप्प भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि एकमात्र धनगढी प्रयोगशालामा दैनिक तीन सय नमुना परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता भए पनि किट अभाव हुँदा सो एकमात्र प्रयोगशालासमेत बन्द छ ।
सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले किट अभाव भएको भन्दै जेठ २२ देखि नमुना संकलन र परीक्षण बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि प्रयोगशाला बन्द गर्नुपरेको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका सूचना अधिकारी दिलीपकुमार श्रेष्ठले बताए ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सुदूरपश्चिममा जम्मा ८ हजार २ सय ४५ जनाको पिसिआर विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । त्यसमा १ सय ५७ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ छ । प्रदेशमा गरिएको जम्मा परीक्षणमध्ये हालसम्म १ हजार १ सय ९६ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
प्रदेशमा गरिएको जम्मा परीक्षणमध्ये ५ हजार ८ सय ८१ सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी र २ हजार ३ सय १६ नमूनाको राष्ट्रिय प्रयोगशाला काठमाडौंमा परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ ।
१ लाख ७० हजार ७ सय ३२ जना परीक्षणको पर्खाइमा
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशका विभिन्न स्थानका क्वारेन्टाइनमा आइतबारसम्म १ लाख ७० हजार ७ सय ३२ जना रहेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजना भारतमा घर फर्किएका हुन् । तर, सरकारले अब क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको पिसिआर परीक्षण आवश्यक नभएको भन्दै १४ दिन राखेर आरडिटीमार्फत परीक्षण गरी घर पठाइरहेको छ । तर, आरडिटीमार्फत नेगेटिभ आएर घर फर्किएका व्यक्ति कोरोना संक्रमण भएर मृत्यु भएको घटना बढिरहेको छ ।
सरकारले गरेको यस्तो निर्णय अवैज्ञानिक भएको भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
आइतबार प्रदेश १ मा ४ हजार ३ सय ८८, प्रदेश २ मा २२ हजार २ सय ३२, वागमती प्रदेशमा ३ हजार १ सय ९५, गण्डकी प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ६३ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । प्रदेश ५ मा ३९ हजार ८ सय ९७, कर्णाली प्रदेशमा ३२ हजार ८२, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६३ हजार ५ सय ७५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
उनीहरू सबै परीक्षणको पर्खाइमा छन् । आरडिटीबाट परीक्षण गर्नुको कुनै औचित्य नभएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।
सरकारले क्वारेन्टाइनमा भएका मानिसलाई पिसिआर परीक्षण नै नगरी घर पठाउँदा हजारौंको संख्यामा कोरोना सर्ने जोखिम हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले पिसिआरको परीक्षण बढाउनु नसक्नुले संक्रमित संख्या बढ्दै गएको उनको दाबी छ । ‘सरकार आफू पनि गर्न सक्र्दैन अरुलाई दिन चाहँदैन,’ डा. मरासिनीले भने, ‘परीक्षणको दायरा बढाउनको लागि निजि क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’
(यो सामग्री सुदूरपश्चिबाट मोहन जोशी, कर्णालीबाट पुन विसी, प्रदेश पाँचबाट कृष्ण मल्ल, गण्डकी प्रदेशबाट अनुप पौडेल, चितवनबाट बसन्त ढुंगानाको सहयोगमा तयार पारिएको हो।)